မာလာလာ အိမျထောငျကခြွငျး – Kyaw Zaw Oo's Blog
November 12, 2021 November 28, 2021 web_master
ပြီးခဲ့သော နှစ်ရက် (နိုဝင်ဘာလ ဆယ်ရက်နေ့) က နိုဗယ်ဆုရှင် မာလာလာ တစ်ယောက် သူမ၏ ပါတနာဖြစ်သူနှင့် လက်မှတ်ရေးထိုးလျက် ထိမ်းမြားလက်ထပ်ခြင်း ပြုလိုက်သော အခါ အချို့က ရယ်သွမ်းသွေး ကြလေသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် လွန်ခဲ့သောလေးလကျော်ခန့်က Vogue မဂ္ဂဇင်းနှင့် နာမည်ကြီး အင်တာဗျူးတစ်ခုတွင် မာလာလာ ကပြောခဲ့သည်မှာ – “I still don’t understand why people have to get married. If you want to haveaperson in your life, why do you have to sign marriage papers, why can’t it just beapartnership?” အိမ်ထောင်ပြုဖို့ (လက်ထပ်ဖို့) လိုအပ်တယ်လို့ လူတွေက ယူဆနေကြတာကို ကျွန်မက နားမလည်နိုင်ဘူး ဖြစ်နေတယ်။ တစ်ဦးတစ်ယောက်ယောက်ကို ကိုယ့်ဘ၀ထဲမှာ ရှိနေစေချင်တဲ့အတွက် လက်ထပ်စာချုပ်တွေမှာ လက်မှတ်ထိုးဖို့ ဘာကြောင့် လိုအပ်ရတာလဲ။ ပါတနာတွေ အဖြစ်နဲ့ နေနေကြရင် မလုံလောက်ပေဘူးလား ဟု သူက ဆိုဖူးလေသည်။ ယခု ရယ်သွမ်းသွေး နေကြသူများကမူ ဒီကလေးမ အခုတော့ နားလည်သွားလေပြီပေါ့လေ ဟု ပျက်ရယ်ပြုစကား ဆိုလေသည်။ သူပြောခဲ့ဖူးသော စကားများကို သတင်းဌာနများက ပြန်ကိုးကား ဖော်ပြကြလေသည်။
အရှေ့တိုင်း လူအဖွဲ့အစည်း အသီးသီးတို့တွင် ပုံမှန်ခြေရှုပ်လေ့ရှိသော အနောက်တိုင်း mastermind ဆရာသခင်တို့သည် အရှေ့တိုင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းတို့၏ အလွှာအသီးသီး နယ်ပယ်အသီးသီးတွင် မိမိတို့ရှေ့တန်းတင်သော (အနောက်စံ)အယူအဆများကို ဖော်ထုတ်ပြောဆိုမည့်သူများအား ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် မွေးစားကြလေ့ရှိပေသည်။ မာလာလာသည် လည်း လစ်ဘရယ်အယူအဆများ ပြောဆိုရန် ဦးနှောက်ထဲသို့ ပါးစပ်ထဲသို့ သွတ်သွင်းခြင်းခံသူများထဲမှ တစ်ဦးဖြစ်လေသည်။ ၀ိရောဓိအများကြီး မဖြစ်နိုင်သည့် ကောင်းမွန်သင့်လျော်သည့် အနောက်တိုင်း စံတန်ဖိုးများကို ရှေ့တန်းတင်ပြောဆိုနေသည့်အခါ မသိသာလှသော်လည်း နှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာ လူ့အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးတို့တွင် အခြေကျနေပြီးဖြစ်သည့် အစဉ်အလာ institution တစ်ခုဖြစ်သော ထိမ်းမြားလက်ထပ် အိမ်ရာထူထောင်ခြင်း (marriage) အား လက်မခံကြောင်း ပြောလာသောအခါ မျက်ခုံးပင့်ကြည့်စရာဖြစ်လာသည်။ ထို့နောက်တွင် တဖန် နောက်လေးလမျှအကြာ၌ ထိုစကားအတိုင်း မဟုတ်မူဘဲ မိမိကိုယ်တိုင် အိမ်ထောင်ပြုလိုက် သောအခါတွင်မူကား မာလာလာအား အပြစ်တင်လိုသူတို့ဘက်က ပြုံး၍ ကြည့်စရာ တဖန် ဖြစ်လာပြန် လေသည်။
တစ်ခေတ်တစ်ခါက Existentialist ပြင်သစ်အတွေးအခေါ်ပညာရှင် ယန်းပေါ့ဆတ် ကား ၎င်းအား နိုဘယ်ဆု ချီးမြှင့်မည် ဆိုသည်ကို ငြင်းပယ်ခဲ့သူ ဖြစ်လေသည်။ အခြားတစ်ဘက်တွင်လည်း သူ၏ ဘ၀သက်တာ ပါတနာဖြစ်သူ ဆီမွန်ဒီဗူးဗွား နှင့် တစ်တသက်လုံး လက်မထပ်အတူတွဲခဲ့သူ ဖြစ်လေသည်။ အိမ်ရာထူထောင် လက်ထပ်ခြင်း အမှုကို မပြုခဲ့သူဖြစ်လေသည်။ (သို့ရာတွင် လူရှေ့နတ်ရှေ့ လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုကို မိန်းကလေးဖြစ်သူ ဆီမွန်ဒီဗူးဗွား ဘက်က လိုလားကောင်း လိုလားခဲ့မည်လား ဆိုသည်ကိုတော့ သေချာ တပ်အပ် မသိနိုင်ပေ။)
ကျွန်တော်အပါအ၀င် လူတိုင်းလိုလိုတို့အဖို့ – မိမိခံယူထားသော အတွေးအခေါ်များ အယူအဆများသည် မိမိကိုယ်တိုင်တွေးခေါ် ရရှိထားခြင်းလော (သို့တည်းမဟုတ်) ၀န်းကျင်က သို့မဟုတ် သူများက သွတ်သွင်းပေးသောကြောင့် ထိုအယူအဆများကို လက်ခံပြောဆိုနေခြင်းလော ဟူ၍ အခါအားလျော်စွာ ဆန်းစစ်ကြည့်နိုင်လျှင် အကျိုးမယုတ်နိုင်ပေ။ ဥာဏ်သတ္တိကောင်းလှသော (မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ် ဟောင်း) မဟာသီယာမိုဟာမက်သည် ၎င်းအနေဖြင့် အစ္စလမ်ဘာသာအားကိုင်းရှိုင်းသူ တစ်ဦးအဖြစ် ပုံရိပ်ရှိမနေလျှင် အောင်မြင်သော မလေးနိုင်ငံရေးသမား တစ်ဦးဖြစ်ဖို့ရန် မလွယ်ကူကြောင်းအား ကောင်းစွာ သဘောပေါက်ခဲ့သူဖြစ်လေသည်။ ဤသည်ပင်လျှင် ပတ်ဝန်းကျင်က မိမိတို့အပေါ် သက်ရောက်သော ဖိအားတစ်မျိုးဖြစ်လေသည်။ အလားတူ ဖိအား ပုံစံအမျိုးမျိုးတို့သည် မိမိတို့အပေါ် အစဉ်အမြဲသက်ရောက် နေနိုင်ပေသည်။
ခေတ်ရေစီးကြောင်းတွင် လွှမ်းမိုးသော အတွေးအခေါ် အယူအဆပုံစံတို့အား trending ဖြစ်သည် ဟု ဆိုနိုင်လေသည်။ ထို trending တို့မှာ အတက်အကျများအား ဖြတ်သန်းပြီးနောက် အခြေကျလာသည် ဆိုလျှင်ကား convention အစဉ်အလာ သတ်မှတ်သဘောတူချက်များ ဖြစ်လာသည် ဟု သဘောပေါက်နိုင်ပေသည်။ ထိုထက်မက အခြေတကျ အစဉ်အလာခိုင်ခိုင်မြဲမြဲ ဖြစ်နေပြီဆိုလျှင်ကား institution များအဆင့်သို့ စွဲမြဲရောက်ရှိ သွားပြီဖြစ်လေသည်။ ကျောက်ဂူများထဲတွင် ရောထွေးယှက်တင်နေခဲ့ကြသည့်အဆင့်မှ သည် သတ်သတ်မှတ်မှတ် လူနှစ်ဦးအတူ နေထိုင်လျက် သားသမီးများပွားစီးသည့်ကိစ္စကို တာဝန်ယူမှု တာဝန်ခံမှုများ အမွေဆက်ခံခြင်းဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်များဖြင့် ဓလေ့ထုံးတမ်းများ၊ ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာအကာအကွယ်ပေးမှုများ ဖြင့် နှစ်ရာပေါင်းများစွာ (သို့မဟုတ် နှစ်ထောင် အနည်းငယ်ချီ) အချိန်ယူတည်ဆောက်မှသာလျှင် အိမ်ထောင်မှုတည်းဟူသော ခိုင်မြဲအစဉ်အလာ institution တစ်ရပ်ဖြစ်လာခဲ့ပေသည်။ ထိုကဲ့သို့ အချိန်ယူတည်ရှိလာသည့် အိမ်ထောင်မှု (marriage) ကဲ့သို့သော institution များကို စိန်ခေါ် (challenge) လုပ်ခြင်းသည် မှားသည် မှန်သည် ဟူသည့် အငြင်းအခုံကို ဤနေရာတွင် အဓိကတင်ပြနေခြင်း မဟုတ်၊ ဤနေရာတွင် အဓိကတင်ပြလိုသည်မှာ insignificant ဖြစ်လှသည့် သေးမွှားလှသည့် လူတစ်ဦးချင်းစီ၏ ကြီးကျယ်မှုအတိုင်းအဆများ ထည့်ဝင်နိုင်မှုအတိုင်းအဆများကို ဆင်ခြင်လိုရင်းသာ ဖြစ်ပေသည်။
ခိုင်မြဲအစဉ်အလာ institution များကို မဆိုဘိနှင့် – လက်သင့်ခံလူမှုသတ်မှတ်ချက် convention များကို မဆိုဘိနှင့် – trending ခေါ် ခေတ်၏ ပုံစံရေစီးကြောင်းများကိုပင်လျှင် မိမိတို့ ခုခံတွန်းလှန်နိုင်ပါ၏လော။ ပုံသွင်းနိုင်ပါ၏လော။ ပုံသွင်းနိုင်ပါက မည်ရွေ့မည်မျှအထိ ပုံသွင်းနိုင်ပါသနည်း။ ကြံစည်တိုင်းဖြစ်သည့် အတ္တ လော။ ကြံစည်တိုင်းမဖြစ်သည့် အနတ္တလော။
ဘာပဲပြောပြော မိမိတို့တစ်ဦးချင်း၏ အတ္တအင်ဂျင်ကို အခြေခံလျက် (သို့တည်းမဟုတ်) အစုအဖွဲ့ တစ်ခုချင်း၏ မဟာဗျူဟာ နည်းဗျူဟာကို အခြေခံလျက် ရေစီးကြောင်းကို အင်အားရှိသူများက တတ်အားသရွေ့ ပုံသွင်းနိုင်ရန် အားထုတ်တတ်ကြလေသည်။ အားမထုတ်နိုင်ကလည်း လက်လျှော့ကြ ရလေသည်။ တစ်ချိန်က trending တွင် တာစားသည့် စကားလုံးသည် “ခိုးဝင် ဘင်္ဂါလီ” ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မည်။ နောင်တစ်ချိန်တွင် လိုအပ်ချက်အရ – trending တွင် တာစားသည့် စကားလုံးသည် “လူမှုတည်ငြိမ်ရေး” social stability ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်သွားနိုင်သည်။ “လူမှုတည်ငြိမ်ရေး” social stability ၏ လိုအပ်ချက်အရ လူမှုရေး သမူဟဖြစ်မှု/သဟဇာတဖြစ်မှု (social cohesion) ကို ထပ်ဆင့်လိုအပ်ချက် ရှိကောင်းရှိနိုင်သည်။ သို့သော် ယင်းတို့သည်ကား အချိန်အလိုက် နယ်မြေအလိုက်သာလျှင် မှန်ကန်မှုရှိသည့် အရာများဖြစ်ကြောင်း သိမြင်ကြရန် လိုအပ်သည်။
အကဲဆတ်သော နယ်မြေဒေသများတွင် အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်သူအဖြစ် မိမိကိုယ်ကို နေရာထားစဉ်းစားရသည့် အဖွဲ့အစည်းများသည် “လူမှုတည်ငြိမ်ရေး” social stability ကို မရှိမဖြစ်အလေးအနက်ထား စဉ်းစားကြရသည်။ မလေးလူမျိုးရေး အစွန်းရောက် ultra နိုင်ငံရေးသမားတစ်ဦး အဖြစ် မကြာခဏ ပုံဖော်ရေးသားခြင်းခံရသူ မဟာသီယာမိုဟာမက် သည်လည်း အမှန်တကယ်မှာတော့ အာဏာမရခင်ရော အာဏာရပြီးနောက်တွင်ပါ မလေးနိုင်ငံအတွင်း မလေး၊ တရုတ်၊ အိန္ဒိယနွယ်များအကြား လူမှုရေးသမူဟဖြစ်မှု social cohesion အား အလေးဂရုမူလုပ်ဆောင်ခဲ့သူ ဖြစ်လေသည်။ သို့သော် social cohesion ဟူသည်မှာကား ကာလဒေသမရွေး တည်ရှိနေသည့် ထာဝရ အမှန်တရားတစ်ခု မဟုတ်သည်ကို သူလည်း သိသည်၊ ကျွန်တော်လည်း သိသည်၊ ဆင်ခြင်ဥာဏ်ရှိသူတိုင်း သိကြလေသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် မူဆလင်အာရပ်နိုင်ငံ အများစုတို့သည် “လူမှုရေးသမူဟဖြစ်မှု social cohesion” ပြုလုပ်ရန် မည်သည့်အခါမှ လုံးဝဆို လုံးဝ လက်မခံသော နိုင်ငံများ ဖြစ်ကြသော်လည်း မူဆလင်များက လူနည်းစုများအဖြစ် ရှိနေသောနိုင်ငံများတွင် “လူမှုရေးသမူဟဖြစ်မှု social cohesion” ပရိုဂရမ်များ ပြုလုပ်ရန်ကိုမူကား ထိုအာရပ်နိုင်ငံများကပင်လျှင် သွယ်ဝိုက်တဖုံ နည်းမျိုးစုံဖြင့် ရံပုံငွေထည့်လျက် အားပေးနေ တတ်ကြကြောင်းကို ကြည့်တတ်က မြင်စရာရှိသည်ကို မြင်နိုင်ပေသည်။
လူ့အဖွဲ့အစည်းတို့တွင် ကာလသတ်မှတ်ချက်အရ လက်ခံကြသည့်မှန်ကန်မှု convention များသာရှိပြီး၊ အမြဲတမ်းမှန်ကန်မှု ဟူ၍ ရှိမနေကြောင်း ကားလ်ပေါ့ပါ ၏ အဆိုအား သတိမူတတ်ပါက တမျိုးတဖုံသော ဆင်ခြင်စရာတစ်ရပ်ကို မမေ့မလျော့သူ ဖြစ်သည် ဟု ဆိုရပေမည်။ ယနေ့မှန်သည် ဆိုကြသည့် သတ်မှတ်ချက်များမှာ နောက်နေ့ကျတော့ မှားသည်ဟု အများက ၀ိုင်းသတ်မှတ်ကြသည်မျိုးမှာ ဖြစ်နိုင်ခြေ သဘာဝတစ်ရပ် ဖြစ်လေသည်။
စကားပြန်ဆက်ရလျှင် – မာလာလာ က ထိုကဲ့သို့ စကားကျွံထားဖူးလေတော့ တစ်သက်လုံး အိမ်ထောင်မပြုဘဲ နေရတော့မလား ဆိုတော့လည်း မဟုတ်ပါ ဟုသာ ထပ်ဆင့်ရှင်းပြလိုပေသည်။ မာလာလာ တစ်ယောက် လောကကိုဖြတ်သန်းပါစေ၊ ကောင်းမွန်စွာ အသက်ကြီးရင့် နိုင်ပါစေ ဟုသာ ကျွန်တော်က ဆုတောင်းလေသည်။ သူ့အနေနှင့် ယခုကဲ့သို့ စကားကျွံဖူးသွားသလို ဖြစ်သွားရသည့် အလှည့်အပြောင်း များကြောင့် – တချို့က စွပ်စွဲကြသလို Greta Thunberg တို့၊ မာလာလာ တို့မှာ အနောက်တိုင်း လက်ဝဲယိမ်းများက မြှောက်ပေးထားသည့် လေအိုး (airbag) များ ဟု မှတ်ချက်ပြု တိုက်ခိုက်နေသည့်စကားများက မှန်ကန်နေသလို ဖြစ်သွားနိုင်သည်ကိုသာ သတိမူမိခြင်း ဖြစ်လေသည်။ ကျွန်တော်အပါအ၀င် နိုင်ငံရေးသမားများသည်ပင်လျှင် ယေဘုကျသဘောပြောရလျှင် – ကျွန်တော့် အနေနဲ့ ဟိုတုန်းက ဟိုလိုထင်လို့ ဟိုလို ပြောမိတယ်၊ အခုတော့ ဒီလိုထင်လို့ ဒီလိုပြောပါတယ် ဆိုသည်တို့မှာ ဖြစ်နေတတ်သည့် သဘောသဘာဝများသာ ဖြစ်ရကား မာလာလာ အား အပြစ်များစွာ မြင်ရန်မရှိပေ။
တိုးတက်သော တော်လှန်သော အမြင်ကျယ်သော ရဲရင့်သော ခေတ်မီသော (သို့မဟုတ် ခေတ်ရှေ့ပြေးသော) အမျိုးသမီးငယ်အချို့က တော်လှန်ပြောင်းလဲသော အမြင်များကို ထုတ်ဖော်ကြသည့်အတွက် ကျွန်တော် အပြစ်မတင်ပေ။
gender တို့ quota တို့ affirmative action တို့ အပါအ၀င် စကားလုံးများကို ပြောတတ်သူများကို ခေတ်မီသော အမြင်ရှိသည် ဟု အမြင်ခံရရန် အလို့ငှာလည်းကောင်း နိုင်ငံရေးအရ တိုးတက်သော အမြင်ရှိသည် ဟု အထင်ခံရရန် အလို့ငှာလည်းကောင်း ပြောနေသည် ဟု ကျွန်တော် စွပ်စွဲ မှတ်ယူခြင်းမရှိပါ။ ထိုအမြင်များသည် idealism အကောင်းဆုံးစံ ဖြစ်စေလိုမှု သဘောအရ မှန်သင့်သလောက်မှန်သည် ဖြစ်သဖြင့် ထူးထူးခြားခြား ကန့်ကွက် ပြောဆိုနေခြင်းမျိုး ကျွန်တော်မရှိဖူးပါ။ သို့ရာတွင် အမျိုးသမီးများကို နေရာပေးခြင်းကိစ္စသည် တသမတ်တည်းကိန်းသေမဟုတ် အခြားသော လွှမ်းမိုးသက်ရောက် အခြေအနေများကိုလည်း ထည့်သွင်းတွက်ချက်တတ်ရမည့် အရေးသာ ဖြစ်သည် ဟူ၍ ကျွန်တော် နားလည်မိလေသည်။
၂၀၂၁-ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ (၁၂) ရက်
ပွီးခဲ့သော နှဈရကျ (နိုဝငျဘာလ ဆယျရကျနေ့) က နိုဗယျဆုရှငျ မာလာလာ တဈယောကျ သူမ၏ ပါတနာဖွဈသူနှငျ့ လကျမှတျရေးထိုးလကျြ ထိမျးမွားလကျထပျခွငျး ပွုလိုကျသော အခါ အခြို့က ရယျသှမျးသှေး ကွလသေညျ။ အဘယျကွောငျ့ဆိုသျော လှနျခဲ့သောလေးလကြျောခနျ့က Vogue မဂ်ဂဇငျးနှငျ့ နာမညျကွီး အငျတာဗြူးတဈခုတှငျ မာလာလာ ကပွောခဲ့သညျမှာ – “I still don’t understand why people have to get married. If you want to haveaperson in your life, why do you have to sign marriage papers, why can’t it just beapartnership?” အိမျထောငျပွုဖို့ (လကျထပျဖို့) လိုအပျတယျလို့ လူတှကေ ယူဆနကွေတာကို ကြှနျမက နားမလညျနိုငျဘူး ဖွဈနတေယျ။ တဈဦးတဈယောကျယောကျကို ကိုယျ့ဘဝထဲမှာ ရှိနစေခေငျြတဲ့အတှကျ လကျထပျစာခြုပျတှမှော လကျမှတျထိုးဖို့ ဘာကွောငျ့ လိုအပျရတာလဲ။ ပါတနာတှေ အဖွဈနဲ့ နနေကွေရငျ မလုံလောကျပဘေူးလား ဟု သူက ဆိုဖူးလသေညျ။ ယခု ရယျသှမျးသှေး နကွေသူမြားကမူ ဒီကလေးမ အခုတော့ နားလညျသှားလပွေီပေါ့လေ ဟု ပကျြရယျပွုစကား ဆိုလသေညျ။ သူပွောခဲ့ဖူးသော စကားမြားကို သတငျးဌာနမြားက ပွနျကိုးကား ဖျောပွကွလသေညျ။
အရှတေို့ငျး လူအဖှဲ့အစညျး အသီးသီးတို့တှငျ ပုံမှနျခွရှေုပျလရှေိ့သော အနောကျတိုငျး mastermind ဆရာသခငျတို့သညျ အရှတေို့ငျးလူ့အဖှဲ့အစညျးတို့၏ အလှာအသီးသီး နယျပယျအသီးသီးတှငျ မိမိတို့ရှတေ့နျးတငျသော (အနောကျစံ)အယူအဆမြားကို ဖျောထုတျပွောဆိုမညျ့သူမြားအား ပုံစံအမြိုးမြိုးဖွငျ့ မှေးစားကွလရှေိ့ပသေညျ။ မာလာလာသညျ လညျး လဈဘရယျအယူအဆမြား ပွောဆိုရနျ ဦးနှောကျထဲသို့ ပါးစပျထဲသို့ သှတျသှငျးခွငျးခံသူမြားထဲမှ တဈဦးဖွဈလသေညျ။ ၀ိရောဓိအမြားကွီး မဖွဈနိုငျသညျ့ ကောငျးမှနျသငျ့လြျောသညျ့ အနောကျတိုငျး စံတနျဖိုးမြားကို ရှတေ့နျးတငျပွောဆိုနသေညျ့အခါ မသိသာလှသျောလညျး နှဈထောငျပေါငျးမြားစှာ လူ့အဖှဲ့အစညျးအသီးသီးတို့တှငျ အခွကေနြပွေီးဖွဈသညျ့ အစဉျအလာ institution တဈခုဖွဈသော ထိမျးမွားလကျထပျ အိမျရာထူထောငျခွငျး (marriage) အား လကျမခံကွောငျး ပွောလာသောအခါ မကျြခုံးပငျ့ကွညျ့စရာဖွဈလာသညျ။ ထို့နောကျတှငျ တဖနျ နောကျလေးလမြှအကွာ၌ ထိုစကားအတိုငျး မဟုတျမူဘဲ မိမိကိုယျတိုငျ အိမျထောငျပွုလိုကျ သောအခါတှငျမူကား မာလာလာအား အပွဈတငျလိုသူတို့ဘကျက ပွုံး၍ ကွညျ့စရာ တဖနျ ဖွဈလာပွနျ လသေညျ။
တဈခတျေတဈခါက Existentialist ပွငျသဈအတှေးအချေါပညာရှငျ ယနျးပေါ့ဆတျ ကား ၎င်းငျးအား နိုဘယျဆု ခြီးမွှငျ့မညျ ဆိုသညျကို ငွငျးပယျခဲ့သူ ဖွဈလသေညျ။ အခွားတဈဘကျတှငျလညျး သူ၏ ဘဝသကျတာ ပါတနာဖွဈသူ ဆီမှနျဒီဗူးဗှား နှငျ့ တဈတသကျလုံး လကျမထပျအတူတှဲခဲ့သူ ဖွဈလသေညျ။ အိမျရာထူထောငျ လကျထပျခွငျး အမှုကို မပွုခဲ့သူဖွဈလသေညျ။ (သို့ရာတှငျ လူရှနေ့တျရှေ့ လကျထပျထိမျးမွားမှုကို မိနျးကလေးဖွဈသူ ဆီမှနျဒီဗူးဗှား ဘကျက လိုလားကောငျး လိုလားခဲ့မညျလား ဆိုသညျကိုတော့ သခြော တပျအပျ မသိနိုငျပေ။)
ကြှနျတျောအပါအဝငျ လူတိုငျးလိုလိုတို့အဖို့ – မိမိခံယူထားသော အတှေးအချေါမြား အယူအဆမြားသညျ မိမိကိုယျတိုငျတှေးချေါ ရရှိထားခွငျးလော (သို့တညျးမဟုတျ) ဝနျးကငျြက သို့မဟုတျ သူမြားက သှတျသှငျးပေးသောကွောငျ့ ထိုအယူအဆမြားကို လကျခံပွောဆိုနခွေငျးလော ဟူ၍ အခါအားလြျောစှာ ဆနျးစဈကွညျ့နိုငျလြှငျ အကြိုးမယုတျနိုငျပေ။ ဉာဏျသတ်တိကောငျးလှသော (မလေးရှားဝနျကွီးခြုပျ ဟောငျး) မဟာသီယာမိုဟာမကျသညျ ၎င်းငျးအနဖွေငျ့ အစ်စလမျဘာသာအားကိုငျးရှိုငျးသူ တဈဦးအဖွဈ ပုံရိပျရှိမနလြှေငျ အောငျမွငျသော မလေးနိုငျငံရေးသမား တဈဦးဖွဈဖို့ရနျ မလှယျကူကွောငျးအား ကောငျးစှာ သဘောပေါကျခဲ့သူဖွဈလသေညျ။ ဤသညျပငျလြှငျ ပတျဝနျးကငျြက မိမိတို့အပျေါ သကျရောကျသော ဖိအားတဈမြိုးဖွဈလသေညျ။ အလားတူ ဖိအား ပုံစံအမြိုးမြိုးတို့သညျ မိမိတို့အပျေါ အစဉျအမွဲသကျရောကျ နနေိုငျပသေညျ။
ခတျေရစေီးကွောငျးတှငျ လှမျးမိုးသော အတှေးအချေါ အယူအဆပုံစံတို့အား trending ဖွဈသညျ ဟု ဆိုနိုငျလသေညျ။ ထို trending တို့မှာ အတကျအကမြားအား ဖွတျသနျးပွီးနောကျ အခွကေလြာသညျ ဆိုလြှငျကား convention အစဉျအလာ သတျမှတျသဘောတူခကျြမြား ဖွဈလာသညျ ဟု သဘောပေါကျနိုငျပသေညျ။ ထိုထကျမက အခွတေကြ အစဉျအလာခိုငျခိုငျမွဲမွဲ ဖွဈနပွေီဆိုလြှငျကား institution မြားအဆငျ့သို့ စှဲမွဲရောကျရှိ သှားပွီဖွဈလသေညျ။ ကြောကျဂူမြားထဲတှငျ ရောထှေးယှကျတငျနခေဲ့ကွသညျ့အဆငျ့မှ သညျ သတျသတျမှတျမှတျ လူနှဈဦးအတူ နထေိုငျလကျြ သားသမီးမြားပှားစီးသညျ့ကိစ်စကို တာဝနျယူမှု တာဝနျခံမှုမြား အမှဆေကျခံခွငျးဆိုငျရာ ပွဋ်ဌာနျးခကျြမြားဖွငျ့ ဓလထေုံ့းတမျးမြား၊ ဥပဒပေိုငျးဆိုငျရာအကာအကှယျပေးမှုမြား ဖွငျ့ နှဈရာပေါငျးမြားစှာ (သို့မဟုတျ နှဈထောငျ အနညျးငယျခြီ) အခြိနျယူတညျဆောကျမှသာလြှငျ အိမျထောငျမှုတညျးဟူသော ခိုငျမွဲအစဉျအလာ institution တဈရပျဖွဈလာခဲ့ပသေညျ။ ထိုကဲ့သို့ အခြိနျယူတညျရှိလာသညျ့ အိမျထောငျမှု (marriage) ကဲ့သို့သော institution မြားကို စိနျချေါ (challenge) လုပျခွငျးသညျ မှားသညျ မှနျသညျ ဟူသညျ့ အငွငျးအခုံကို ဤနရောတှငျ အဓိကတငျပွနခွေငျး မဟုတျ၊ ဤနရောတှငျ အဓိကတငျပွလိုသညျမှာ insignificant ဖွဈလှသညျ့ သေးမှားလှသညျ့ လူတဈဦးခငျြးစီ၏ ကွီးကယျြမှုအတိုငျးအဆမြား ထညျ့ဝငျနိုငျမှုအတိုငျးအဆမြားကို ဆငျခွငျလိုရငျးသာ ဖွဈပသေညျ။
ခိုငျမွဲအစဉျအလာ institution မြားကို မဆိုဘိနှငျ့ – လကျသငျ့ခံလူမှုသတျမှတျခကျြ convention မြားကို မဆိုဘိနှငျ့ – trending ချေါ ခတျေ၏ ပုံစံရစေီးကွောငျးမြားကိုပငျလြှငျ မိမိတို့ ခုခံတှနျးလှနျနိုငျပါ၏လော။ ပုံသှငျးနိုငျပါ၏လော။ ပုံသှငျးနိုငျပါက မညျရှမေ့ညျမြှအထိ ပုံသှငျးနိုငျပါသနညျး။ ကွံစညျတိုငျးဖွဈသညျ့ အတ်တ လော။ ကွံစညျတိုငျးမဖွဈသညျ့ အနတ်တလော။
ဘာပဲပွောပွော မိမိတို့တဈဦးခငျြး၏ အတ်တအငျဂငျြကို အခွခေံလကျြ (သို့တညျးမဟုတျ) အစုအဖှဲ့ တဈခုခငျြး၏ မဟာဗြူဟာ နညျးဗြူဟာကို အခွခေံလကျြ ရစေီးကွောငျးကို အငျအားရှိသူမြားက တတျအားသရှေ့ ပုံသှငျးနိုငျရနျ အားထုတျတတျကွလသေညျ။ အားမထုတျနိုငျကလညျး လကျလြှော့ကွ ရလသေညျ။ တဈခြိနျက trending တှငျ တာစားသညျ့ စကားလုံးသညျ “ခိုးဝငျ ဘင်ျဂါလီ” ဖွဈကောငျးဖွဈမညျ။ နောငျတဈခြိနျတှငျ လိုအပျခကျြအရ – trending တှငျ တာစားသညျ့ စကားလုံးသညျ “လူမှုတညျငွိမျရေး” social stability ဖွဈကောငျး ဖွဈသှားနိုငျသညျ။ “လူမှုတညျငွိမျရေး” social stability ၏ လိုအပျခကျြအရ လူမှုရေး သမူဟဖွဈမှု/သဟဇာတဖွဈမှု (social cohesion) ကို ထပျဆငျ့လိုအပျခကျြ ရှိကောငျးရှိနိုငျသညျ။ သို့သျော ယငျးတို့သညျကား အခြိနျအလိုကျ နယျမွအေလိုကျသာလြှငျ မှနျကနျမှုရှိသညျ့ အရာမြားဖွဈကွောငျး သိမွငျကွရနျ လိုအပျသညျ။
အကဲဆတျသော နယျမွဒေသေမြားတှငျ အုပျခြုပျမငျးလုပျသူအဖွဈ မိမိကိုယျကို နရောထားစဉျးစားရသညျ့ အဖှဲ့အစညျးမြားသညျ “လူမှုတညျငွိမျရေး” social stability ကို မရှိမဖွဈအလေးအနကျထား စဉျးစားကွရသညျ။ မလေးလူမြိုးရေး အစှနျးရောကျ ultra နိုငျငံရေးသမားတဈဦး အဖွဈ မကွာခဏ ပုံဖျောရေးသားခွငျးခံရသူ မဟာသီယာမိုဟာမကျ သညျလညျး အမှနျတကယျမှာတော့ အာဏာမရခငျရော အာဏာရပွီးနောကျတှငျပါ မလေးနိုငျငံအတှငျး မလေး၊ တရုတျ၊ အိန်ဒိယနှယျမြားအကွား လူမှုရေးသမူဟဖွဈမှု social cohesion အား အလေးဂရုမူလုပျဆောငျခဲ့သူ ဖွဈလသေညျ။ သို့သျော social cohesion ဟူသညျမှာကား ကာလဒသေမရှေး တညျရှိနသေညျ့ ထာဝရ အမှနျတရားတဈခု မဟုတျသညျကို သူလညျး သိသညျ၊ ကြှနျတျောလညျး သိသညျ၊ ဆငျခွငျဉာဏျရှိသူတိုငျး သိကွလသေညျ။ အဘယျကွောငျ့ဆိုသျော မူဆလငျအာရပျနိုငျငံ အမြားစုတို့သညျ “လူမှုရေးသမူဟဖွဈမှု social cohesion” ပွုလုပျရနျ မညျသညျ့အခါမှ လုံးဝဆို လုံးဝ လကျမခံသော နိုငျငံမြား ဖွဈကွသျောလညျး မူဆလငျမြားက လူနညျးစုမြားအဖွဈ ရှိနသေောနိုငျငံမြားတှငျ “လူမှုရေးသမူဟဖွဈမှု social cohesion” ပရိုဂရမျမြား ပွုလုပျရနျကိုမူကား ထိုအာရပျနိုငျငံမြားကပငျလြှငျ သှယျဝိုကျတဖုံ နညျးမြိုးစုံဖွငျ့ ရံပုံငှထေညျ့လကျြ အားပေးနေ တတျကွကွောငျးကို ကွညျ့တတျက မွငျစရာရှိသညျကို မွငျနိုငျပသေညျ။
လူ့အဖှဲ့အစညျးတို့တှငျ ကာလသတျမှတျခကျြအရ လကျခံကွသညျ့မှနျကနျမှု convention မြားသာရှိပွီး၊ အမွဲတမျးမှနျကနျမှု ဟူ၍ ရှိမနကွေောငျး ကားလျပေါ့ပါ ၏ အဆိုအား သတိမူတတျပါက တမြိုးတဖုံသော ဆငျခွငျစရာတဈရပျကို မမမေ့လြော့သူ ဖွဈသညျ ဟု ဆိုရပမေညျ။ ယနမှေ့နျသညျ ဆိုကွသညျ့ သတျမှတျခကျြမြားမှာ နောကျနကေ့တြော့ မှားသညျဟု အမြားက ၀ိုငျးသတျမှတျကွသညျမြိုးမှာ ဖွဈနိုငျခွေ သဘာဝတဈရပျ ဖွဈလသေညျ။
စကားပွနျဆကျရလြှငျ – မာလာလာ က ထိုကဲ့သို့ စကားကြှံထားဖူးလတေော့ တဈသကျလုံး အိမျထောငျမပွုဘဲ နရေတော့မလား ဆိုတော့လညျး မဟုတျပါ ဟုသာ ထပျဆငျ့ရှငျးပွလိုပသေညျ။ မာလာလာ တဈယောကျ လောကကိုဖွတျသနျးပါစေ၊ ကောငျးမှနျစှာ အသကျကွီးရငျ့ နိုငျပါစေ ဟုသာ ကြှနျတျောက ဆုတောငျးလသေညျ။ သူ့အနနှေငျ့ ယခုကဲ့သို့ စကားကြှံဖူးသှားသလို ဖွဈသှားရသညျ့ အလှညျ့အပွောငျး မြားကွောငျ့ – တခြို့က စှပျစှဲကွသလို Greta Thunberg တို့၊ မာလာလာ တို့မှာ အနောကျတိုငျး လကျဝဲယိမျးမြားက မွှောကျပေးထားသညျ့ လအေိုး (airbag) မြား ဟု မှတျခကျြပွု တိုကျခိုကျနသေညျ့စကားမြားက မှနျကနျနသေလို ဖွဈသှားနိုငျသညျကိုသာ သတိမူမိခွငျး ဖွဈလသေညျ။ ကြှနျတျောအပါအဝငျ နိုငျငံရေးသမားမြားသညျပငျလြှငျ ယဘေုကသြဘောပွောရလြှငျ – ကြှနျတေျာ့ အနနေဲ့ ဟိုတုနျးက ဟိုလိုထငျလို့ ဟိုလို ပွောမိတယျ၊ အခုတော့ ဒီလိုထငျလို့ ဒီလိုပွောပါတယျ ဆိုသညျတို့မှာ ဖွဈနတေတျသညျ့ သဘောသဘာဝမြားသာ ဖွဈရကား မာလာလာ အား အပွဈမြားစှာ မွငျရနျမရှိပေ။
တိုးတကျသော တျောလှနျသော အမွငျကယျြသော ရဲရငျ့သော ခတျေမီသော (သို့မဟုတျ ခတျေရှပွေ့ေးသော) အမြိုးသမီးငယျအခြို့က တျောလှနျပွောငျးလဲသော အမွငျမြားကို ထုတျဖျောကွသညျ့အတှကျ ကြှနျတျော အပွဈမတငျပေ။
gender တို့ quota တို့ affirmative action တို့ အပါအဝငျ စကားလုံးမြားကို ပွောတတျသူမြားကို ခတျေမီသော အမွငျရှိသညျ ဟု အမွငျခံရရနျ အလို့ငှာလညျးကောငျး နိုငျငံရေးအရ တိုးတကျသော အမွငျရှိသညျ ဟု အထငျခံရရနျ အလို့ငှာလညျးကောငျး ပွောနသေညျ ဟု ကြှနျတျော စှပျစှဲ မှတျယူခွငျးမရှိပါ။ ထိုအမွငျမြားသညျ idealism အကောငျးဆုံးစံ ဖွဈစလေိုမှု သဘောအရ မှနျသငျ့သလောကျမှနျသညျ ဖွဈသဖွငျ့ ထူးထူးခွားခွား ကနျ့ကှကျ ပွောဆိုနခွေငျးမြိုး ကြှနျတျောမရှိဖူးပါ။ သို့ရာတှငျ အမြိုးသမီးမြားကို နရောပေးခွငျးကိစ်စသညျ တသမတျတညျးကိနျးသမေဟုတျ အခွားသော လှမျးမိုးသကျရောကျ အခွအေနမြေားကိုလညျး ထညျ့သှငျးတှကျခကျြတတျရမညျ့ အရေးသာ ဖွဈသညျ ဟူ၍ ကြှနျတျော နားလညျမိလသေညျ။
၂၀၂၁-ခုနှဈ နိုဝငျဘာလ (၁၂) ရကျ
blog post number – 220
short link to this post => https://l.linklyhq.com/l/fGD9
Previous ရဲနီ စံရှမေောငျ ၏ ဖွတျသနျးမှုမြား
Next မွနျမာ့နိုငျငံရေးပွဿနာကွားက ရခိုငျပွညျအနာဂါတျ အလားအလာ